Phinda Yokubhaliselwe PHOTORECOVERY® Software [PC] | Data Recovery
Phinda Yokubhaliselwe PHOTORECOVERY® Software [PC]
Home → Phinda Yokubhaliselwe PHOTORECOVERY® Software [PC]
PHOTORECOVERY® PRO Ukunikezwa okubalulekile!
Ilayisensi Sokuvuselela futhi Thuthukisa
PHOTORECOVERY® PRO yonke izici ezinhle PHOTORECOVERY®, kodwa inawo futhi Digital Media Doctor ngoba Ukusebenza Testing and Media yokuvuselela. Ungakwazi ngokushesha Backup, Sula, Ifomethi, nokubuyisa labo esetshenziswa Digital Memory Cards a “like entsha” lizinga lekuphumelela. Ngeke bazi lapho sekuyisikhathi sokuba esikhundleni khadi yakho – babe nolwazi ngaphambi kokuba sekudlule isikhathi kakhulu!
Ungakwazi ukuvuselela ukubhalisa kwakho ukuze PHOTORECOVERY PRO® lapho kugamanxa we intengo! Chofoza inkinobho Thenga Manje ngenhla ukuvuselela i $30!
PHOTORECOVERY® Ukunikezwa okubalulekile!
Sicela uchofoze inkinobho Thenga Manje ukuvuselela ukubhalisa kwakho kwe enyakeni owodwa PHOTORECOVERY® ngoba $20!
ukuvuselela, uzodinga ukulanda futhi ufake inguqulo entsha software ngemuva kokuthi uqede ukuthenga sokuvuselela. ke, kokufaka inguqulo entsha uzosusa inguqulo endala futhi zikuvumela ukuthi kusebenze usebenzisa inombolo entsha ye-serial kusuka irisidi yakho.